China Popular njem elu ike 65W ụdị c pd eriri USB chaja PD65W rụpụta na ụlọ ọrụ | Eletriki Electric
*Ndenye Nchaji Pd 65W Nkọwa nkọwa
Teknụzụ GaN kachasị ọhụrụ: nke GaN na-arụ ọrụ, chaja buru ibu na-adị ntakịrị & na-abawanye arụmọrụ na-ebuwanye ibu ma na-eme obere okpomọkụ. 65W pd gan chaja dị ike zuru ezu iji zuru 15.4 gị "MacBook Pro na naanị 2 awa.
Kwadoro site na GaN tech, chaja a bụ 30% pere mpe karịa chaja ndị ọzọ, dakọtara ọnụ iji soro gị gaa ebe ọ bụla ị na-aga. Nke a na 65W PD chaja a na USB-ike nnyefe pụtara ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa maka ngwaọrụ USB-PD gị. Emere chaja a na-eme njem USB nke chaja abụọ iji wepụta ikike 5 nke chaja ọkọlọtọ ugboro 5 n'ọtụtụ ngwaọrụ n'otu oge. Igosipụta mgbanwe ọhụrụ ọhụụ na teknụzụ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ, nnyefe ike USB-C na nkwụnye ụgwọ ọsọ ọsọ, otu chaja a bụ naanị ihe ịchọrọ iji mee ka ngwaọrụ gị dị ugbu a wee nọrọ n'ihu usoro maka eletrọniki ọ bụla n'ọdịnihu.
Portsgbọ mmiri abụọ ahụ nwere ike ịnapụta ụgwọ ọkụ dị elu na ihe niile sitere na smartphones na mbadamba na laptọọpụ USB-C ike agụụ na-agụ dị ka Macbook 12-inch. Na-akwado ngwa ngwa maka iPhone iji kwụọ ụgwọ iPhone 8 ma ọ bụ mgbe e mesịrị site na efu ruo 50% na 30 nkeji na eriri USB gụnyere, na smartphones ndị ọzọ / mbadamba na ọsọ ọsọ. Nakwa na smart IC mgbawa - IC mgbawa dị elu na-akpaghị aka na-achọpụta ma na-anapụta ike kachasị mma maka ikike ejikọrọ na ngwaọrụ ejikọrọ.
Ngwaọrụ gị na-akwụ ụgwọ dị ka ngwa ngwa o kwere mee mgbe ị na-echebe ndụ batrị gị. (At Kwekọrọ n'Ozizi na PD & QC odori). Ebube na nke a na - ebugharị - a nwalere ọdụ ụgbọ mmiri ahụ iji gbochie ojiji 10,000 na chaja ka arụ ọrụ iji guzogide na-aga n'ihu na-akwụ ụgwọ maka opekempe nke awa 10,000, na-enye gị mma ị nwere ike ịdabere na ya. Pd gan USB chaja na Intelligent ike nkesa, maximizing na-arụ ọrụ arụmọrụ n'ihi na ma otu ma ọ bụ otutu ngwaọrụ. Emere ya iji rụọ ọrụ na kọmputa ọhụụ na ngwaọrụ dị nro, na-enye ohere maka nghazi nkwụghachi nkwụghachi na ụgwọ ngwa ngwa.
*Pịnye C Pd chaja ekwentị chaja 65W oke
GaN Technology Type C Pd chaja
Elu Safety Pd Ekwentị chaja
At Kwekọrọ n'Ozizi Mgbanwe PDGN GaN USB Charger
Ọgụgụ isi nke ike Pd Wall chaja
Jiri aghụghọ kesaa 65W nke ike n'etiti ngwaọrụ 3 mgbe ị na-akwụ ụgwọ n'otu oge ma na-akwado ịgba ọsọ ọsọ ọsọ ruo 65W mgbe otu ngwaọrụ jikọọ, ọ bụ chaja mgbidi mara mma.
Nke gara aga: Ọdịdị kachasị ọhụrụ maka chaja ekwentị mkpanaaka chaja PD100W
Osote: Hot dị fechaa mgbidi ngwa ngwa elu ike USB mgbidi nkwụnye 65W